Ahoana ny fomba hanatsarana ny fanoratana ataonao ho an'ny milina fikarohana amin'ny 2014 | Martech Zone
Ahoana ny fomba hanatsarana ny fanoratana ataonao ho an'ny milina fikarohana amin'ny 2014
Alahady, Septambra 7, 2014 Alahady, Septambra 7, 2014 Douglas Karr
Mbola manana fotoam-panofanana miaraka amin'ireo mpanjifantsika izahay mba hanazavana ny fanontaniana betsaka momba ny motera fikarohana sy ny fomba fanoratana hanatsarana ny fahitana anao. Tsotra sy tsotra tsy soratanao ho an'ny motera fikarohana, manoratra ho an'ny olona ianao. Mino aho fa ny algorithman'i Google dia nandroso tamin'ny farany hahafantarana ny mpanoratra sy ny fahefana, ny fizarana sy ny lazany, ny mitanisa ny fanavahana ary ny atiny hanomezana fahafaham-po ny tanjon'ny mpikaroka.
Ny kopia dia iray amin'ireo lafiny lehibe indrindra amin'ny Search Engine Optimization eto an-toerana. Saingy amin'ny alàlan'ny fanosehana tsy tapaka Google ny fanavaozana algorithm vaovao sy ny fanovana ny fitsipiky ny lalao, tena sarotra ny manara-maso izay mandeha. Ankoatr'izay, sarotra ny mahafantatra raha manimba zavatra bebe kokoa noho ny tsara amin'ny filaharanao ny ezaka ataonao amin'ny fanatsarana. Ireto misy torohevitra 13 izay hanampy anao hanoratra atiny milahatra amin'ny 2014. Michael Aagard, ContentVerve
Amin'ny 2014, ny infographic dia mifantoka tanteraka amin'ny traikefa mety ho an'ny mpamaky. Tsy mino marina aho fa izany no izy SEO Copywriting, Miady hevitra aho fa tsara be ireo torohevitra copywriting toro-hevitra. Raha ny fijerin'ny SEO dia mbola misy ny fotoana azo antoka hahazoana fampisehoana votoaty tsara amin'ny tranokalanao, na izany aza. Lohateny maharesy lahatra, lahatsoratra mifandraika amin'izany, tranokala hierarchie an-tranonkala, haino aman-jery maso, fandraisana andraikitra amin'ny finday… ireo lafiny rehetra ireo dia mila ampifandraisina amin'ny paikadin'ny votoatinao hahazoana antoka fa miaina traikefa mahafinaritra ny mpampiasa. Rehefa mitranga izany, filaharana milina fikarohana lehibe hanaraka!
Tags: SEO 2014contentvervecopywritingteknika fanoratanaMichael Aagardseo fanoratanaseo torohevitra fanoratanamanoratra kopia fikarohana
Ny fampiasam-bola mora amin'ny audio dia hampitombo ny firotsahana horonantsary